कुलमान घिसिङ्गको पक्षमा एकजुट बनौँ - उनको बिरोधीहरुको भण्डाफोर गरौं ! - USNEPALNEWS.COM
कुलमान घिसिङ्गको पक्षमा एकजुट बनौँ – उनको बिरोधीहरुको भण्डाफोर गरौं !
- महेश नेपाल प्रकाशित मिति: January 1, 2017
देशमा लोडसेडिङ हटाएर हरेक नेपालीको मन मुटुमा बस्न सफल ब्यक्ती हुन कुलमान घिसिङ्ग । उनी गाउँमा टुकि बत्तिको धुवाँ खाँदै पढेका र काठ्माण्डौ आएर पहिलो पटक बिजुली बत्ती देखेका रामेछापका एक सामान्य किशानका छोरा हुन । हाल नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको प्रमुख भएर उज्यालो नेपाल अभियानमा लागेर सफलता प्राप्त गर्दै गरेका र हरेक नेपालीको मन मस्तिष्कमा बसिरहेका घिसिङ्गलाई चौतर्फी रुपमा प्रहार भैरहेको छ । देशलाई अँध्यारो तर्फ धकेलेर आफू किर्नु मोटाएझै मोटाउन पल्किएका जन्तुहरुलाई हामिले घोक्रेठ्याक लगाएर लखेट्नु अहिलेको पहिलो आवश्यकता बनेको छ । जब-जब हामी परिवर्तनको सपना देख्छौँ, जब-जब हामी सफलता तर्फ अगाडि बढ्न थाल्छौँ अनि हाम्रा प्रगतीमा कुठाराघात गर्नेहरु, हाम्रा सपनाहरुमा लात मार्ने ब्वाँसाहरु सल्बलाउन थाल्छ्न । बाउ बाजेले भन्थे-यो सतिले सरापेको देश हो, यहाँ राम्रा काम गर्ने हरुलाई टिक्न दिईँदैन भनेर हो त्यस्तै प्रमाणित हुँदै आएको छ बिगत देखि बर्तमान सम्म ।
बर्षौ देखिको माडेहरुको व्यापार घट्ला भनेर, भ्रष्टाचारीको कमिशन गुम्ला भनेर, कालो बजारी डुब्ला भनेर हामी तिमिहरु संग सति जान सक्दैनौ पिपासुहरु । हामी जान्दैनौ कानुनका कति सिङ्ग हुन्छन । हामी बुझ्दैनौ कानुनको भाषा के हो ? हामी बुझ्दैनौ सर्वोच्चको प्लान के हो र फैसला गर्ने आधार के हो ? बस! हामी यति बुझ्छौ कुलमान घिसिङ्ग नेपाललाई चाहिने मान्छे हो, कुलमान घिसिङ्ग अँध्यारोमा आफ्नो सुन्दर भबिष्य खोजिरहेका सारा नेपालीका लागि देउता समान ब्यक्ती हुन । सर्वोच्च अदालतद्वारा प्राधिकरणका सञ्चालकलाई तत्काल नहटाउन जुन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिईयो । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई हामी सुझाब दिन चाहन्छौं नेपाली जनताको पक्षमा निर्णय आओस, कुलमान घिसिङ्गक पक्षमा निर्णय आओस । प्राधिकरणमा निर्देशक कुलमान घिसिङ्ग नियुक्त भएपछि असहयोग गर्दा बर्खास्त परेका सञ्चालकहरु लक्ष्मण अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछाने यी देशमाराहरु सँधै बर्खास्तमा नै परुन । हामी यत्ती चाहन्छौं कुलमान घिसिङ्गलाई काम गर्न दिईनुपर्छ, काम गर्ने वातावरण बनाईनुपर्छ । हामी जनता कसैको हनुमान हैनौ, हामी कसैको पुच्छर बन्न चाहँदैनौ तर हामी यत्ती भन्छौँ कुलमान घिसिङ्ग जस्ताको जयजयकार हुनुपर्छ ।
सर्वोच्चले गरेको गल्ती उसले स्विकार्नुपर्छ । अदालतमा घुषखोरिको बास हुन्छ भन्ने कुरा गलत साबित बनाउन सक्नुपर्छ । सबै पार्टीका हनुमान मात्र छैनन श्रीमान ज्यु ! बिबेकशिल अनी चेतनशिल नेपालीहरु पनि छन । कानुन अन्धो हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित नगर्नुस । कानुन कस्को लागि ? कानुन के का लागि ? छातीमा हात राखेर र भोली मर्नुपर्छ भन्ने सोचेर निर्णय लिनुस । भोली तपाईको सबैले जय जयकार गरून् । लाखौँ मान्छे मलामी जाउन । दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ खेपेर कतिञ्जेल ८३ हजार मेघावाट बिजुली निकाल्ने क्षमता छ भनेर घोकिरहने ? हरेक देशप्रेमी र बिकाशप्रेमी दाजुभाई हरु अब एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ ।
यदी हटाइएका सञ्चालक समिति सदस्यहरु सर्वोच्च मार्फत पुनर्वहाली भएमा प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङलाई काम गर्न एकदमै गाह्रो हुनेछ । कुलमान घिसिङ जस्ता बिकाशप्रेमी ब्यक्तिहरुलाई निर्धक्क काम गर्न दिनुपर्छ । हरेकले पार्टी भन्दा माथी उठेर साथ सहयोग गर्नुपर्छ । आफ्नो राजनितिक स्वार्थ पुर्तिको लागि यस्ता बिकाश प्रेमी मान्छेहरुलाई बलिको बोको बनाईन हुँदैन । एउटा पार्टीको निर्णय अर्को पार्टीले उल्ट्याउने, एउटा पार्टिको सरकार बनेको बेलामा नियुक्ती भएका असल कर्मचारीलाई आफू सत्तामा गएपछी पछारिदिने हो भने हामीले देश बिकाश हुने कल्पना नगरे पनि हुन्छ । हामी भेडा जनता हैन,बिकाशप्रेमी र सचेत नागरिक बन्नु अत्यावश्यक छ ।
कुलमान घिसिङ जस्तो बिकाशप्रेमी र केही गर्छु भन्ने मान्छेको पक्षमा माईतिघर मण्डलामा पौष १९ गते हुन लागिरहेको विशाल प्रदर्शनमा हामी सबै सहभागी बनौँ । साँच्चै देश बनाउने हो भने ब्यक्तिगत स्वार्थ छाडौँ, पार्टिगत स्वार्थ छाडौँ । अनि छातीमा राष्ट्रीयता बोकेर देशको लागि लडौँ, कुलमान घिसिङ जस्ताहरुको पक्षमा बोलौँ । हाम्रा पार्टिगत स्वार्थका लागि, हाम्रा ब्यक्तिगत फाईदाका लागि हाम्रा सन्ततीहरुको भबिष्य अन्धकार नबनाउँ । देशको भबिष्य लिलाम नगरौँ ।
Jonathan Lemire | AP	 July 12, 2020